“I ganaaxa haddii aad rabtaan” – Tababare Pep Guardiola oo si wayn uga horyimid caburinta FA-ga ingiriiska – Gool FM
“I ganaaxa haddii aad rabtaan” – Tababare Pep Guardiola oo si wayn uga horyimid caburinta FA-ga ingiriiska
Liibaan Fantastic February 26, 2018
(Manchester) 26 Feb 2018 Tababaaha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa markale jabiyay sharciga xiriirka kubada cagta ingiriiska kulankii xalay ay 3-0 uga adkaadeen Arsenal.
FA-ga ingiriiska ayaa ku tuhmay tababaraha reer Spain inuu isku lifaaqayo siyaasada iyo ciyaaraha, kadib markii lagu arkay isaga oo xiran calaamad jaale ah oo uu ku muujinayo inuu ka xunyahay xariga 4-siyaasi oo ka soo jeeda Catalonia.
Xiriirka kubadda cagta ingiriiska ayaa ku amray tababare Pep inuu joojiyo arinkaas, balse dhagaha ayuu ka furaystay, taas oo keentay in tuhun loo soo jeediyo kaas oo la doonayo inuu jawaab ka bixiyo ilaa 5-ta Maarso.
Pep Guardiola ayaa jawaabta ka hor xalay soo xirtay isla calaamadii lagu haystay, wuxuuna sheegay in UEFA ay u fasaxday inuu xiran karo calaamadaas.
“Waa ay i ganaaxi karaan laakiin waxaa jira dad wali xabsiga ku jira, haddii FA-ga ingiriiska, UEFA iyo xitaa FIFA ay doonaan inay i ganaaxaan, waa ay i ganaaxi karaan” ayuu yiri Pep kadib kulankii Arsenal.
“Waa ay ogyihiin in aanan fujinayn calaamadaas, UEFA ra’yi ka duwan kan FA-ga ayeey qabaan, waxayna ii sheegeen inaan xiran karo waqtigii aan doono haddiiba aan soo muujinayo ixtiraam”.
Kylian Mbappe oo xalay si wayn uga carooday tababare Unai Emery (Maxaa lagu sameeyay)
Thierry Henry oo doonaya inuu tababare u noqdo Arsenal